Iga Aamus Kaasi Gaalkaa Dhaamee, Waa Qiso Dhab Ah Oo Xanuun badan-VIDEO - iftineducation.com
Iga Aamus Kaasi Gaalkaa Dhaamee, Waa Qiso Dhab Ah Oo Xanuun badan-VIDEO
aadan21 / March 15, 2016
iftineducation.com – Sidii ayey yeeshay Sheekh walbana wuxu u sheegay arrintaas ay hooyadeed u sheegtay in ay tahay arin aanan raad iyo reeb toona ku laheyn Diinteena Suuban ee Islaamka.
Dhanka kale Nebigeyna wuxu yin Caleehi Salaatu Wasalaam, Diinta Islaamka waa Diin kaamil ah oo aan waxba ka maqneyn, cidii wax ku soo darto ama ka dhinto iyaga ayaa lagu celinayaa. Arrinta dad badan ka yaabisay ayaa waxay tahay, Dad Islaam ah ioo%, hadana aanan ku carnal falin waxa ay baneestay Diinta Islaamka waa wax inaga wada yaabiyey. Gabadhii oo iska ooyneysa oo sheekada sii wadata ayaa waxay tiri waxaa igu dhashay in aan ka raadiyo Ingiriiska nasiib wanaag waan arkay, waxaan rabaa inaan ku guursado, waxaan rabaa inaan ka xaal-maiiyo qaladkii aan kaala dul dhacay ayey si hoose u tiri.
Balse wuxu igu jawaabay ayey tiri, Nafta mar waa ay ku rabtay balse hada raali kaama aha, ee iga tag, maanta maaha maalintaad i dhaheysa haddii aad gacanteda qabato meeshaad iga geli laheyd diyaarso ee maanta waa maalinteeda ee hadaad iga hor dhaqaaqi weyday walee calooshaada xaaladaada waa loo-yaabi doonaa. Hanjabaada ka soo maaxaneysa umma jeedo ee waxay u jeedaa oo kaliya sidii ay ku hanan laheyd, kadib waa ay iskaga tagtay, waxay ku soo laabatay Australia waxay arrintii u sheegtay gabadhii ay jaamacadda wada dhigan jireyn, nasiib wanaag gabadhii ayaa ku tiri ina keen laga yaabo darteeda inuu kuugu cafiyo’e, mar kale ayey ku soo laabteen Ingiriiska waa ay la kulmeen, wuxuuse u sheegay gabadhii kale in uu u haayo Abaal weyn, isagoo u raaciyey gabadhaan xaas ii noqon meyso oo hooyadee oo kale ayey iga tahay waxbana uma qabo waa cafiyey
VIDEO HOOSE KA DAAWO HALKAN:
Naasaha Ma raaxo ayaa ku jirta Mise Waa isbuunyo la iska taabsado-Xog muhiim ah
DAAWO”’Dhaqaatiir Swedish ah oo caqliga Soomaalida hadal lala yaabay ka sheegay